Oge ọkọchị a abụrụla nke abụọ kachasị sie ike na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge ọkọchị a abụrụla nke abụọ kachasị sie ike na Spain
Claudi ego | | Amụma
Nyaahụ, Fraịdee, Septemba 22, oge ọkọchị gwụrụ. Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na Steeti, Aemet, egosiwo na ọ bụ oge ọkọchị nke abụọ kachasị sie ike na Spain. Ebe ọ bụ na ndekọ malitere, ọ bụ naanị 2003 ka e gosipụtara dị ka oge okpomọkụ kachasị ekpo ọkụ na mba ahụ. Nkezi okpomọkụ na mba ahụ bụ 25ºC. Agbanyeghị na ụwa, dị ka mgbe niile, data ahụ dị iche, nkezi okpomọkụ nke afọ a bụ 24,7ºC. Nke a pụtara na nkezi 1ºC dị elu karịa oge ọkọchị gara aga n'etiti 6 na 1981.
Buru n'uche na ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ dị iche iche n'ihi na ha sitere na mpaghara dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ bụghị, summers gụnyere "na ogo" bụkwa ndị kachasị mma n'ụwa niile. Ọ gafeela ụkpụrụ nke 2015 na nke dị elu nke 2016, ihe dị omimi, atụghị anya ime. Mgbe ọkụ dị karịa oge ọkọchị, ọdịda a dị ka otu n'ime ihe kachasị mma.
Nyochaa otu esi emetụta Mercury na thermometers
Ugbua na mbido, na June, malitere dị ka ọnwa kachasị ekpo ọkụ kemgbe 1965. Na nkezi okpomọkụ nke 3ºC dị elu karịa nkezi nke ọnwa a kemgbe mmalite nke ndekọ. Julaị na Ọgọstụ dịkwa ọkụ karịa ka ọ na-adịkarị, na ọnọdụ okpomọkụ nke 0 na 9ºC dị elu karịa nkezi, karị.
Na ọkara ndịda nke mba ahụ, enweela ndekọ nke okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke ọdụ ụgbọ elu Córdoba na 46ºC bụ nke kachasị elu. 9ºC na ọdụ ụgbọ elu Granada ma ọ bụ 45ºC ruru Jaén. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndekọ ndekọ, na mgbakwunye na ebili mmiri ọkụ siri ike, ebe ọtụtụ obodo na-edekọ okpomọkụ karịa 7ºC maka ụbọchị ndị sochirinụ.
N'agbanyeghị nke a, n'ihe gbasara mmiri ozuzo, anyị nwere ike ikwu maka oge udu mmiri. Na nkezi mmiri ozuzo na Spain nke 79 lita kwa square mita, dị 7% karịa nkezi dị ugbu a.
Anyị na-atụ anya na oge mgbụsị akwụkwọ ga-adị ntakịrị karịa mmiri mmiri, n'ihi na na nhazi kwa afọ ọ bụ karịa nkezi, 12% n'okpuru. Na ọnọdụ okpomọkụ, nke a na-atụ anya ịdị n'etiti 0 na 5 1C dị elu karịa nkezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Oge ọkọchị a abụrụla nke abụọ kachasị sie ike na Spain
EU na-enyocha mkpa ọ dị ịbelata anwuru na-eche ihu mgbanwe ihu igwe
Oge mgbụsị akwụkwọ 2017 ga-adị ọkụ karịa nke nkịtị